- नेपाली सन्देश शुक्रबार, साउन २५, २०७५ , 542.6K जनाले हेर्नुभयो
कपनमा ६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा थियो। नाम मात्र सार्वजनिक। विभिन्न व्यक्तिले कब्जा जमाएका। आफ्नै नाममा दर्ता गराएका। घर, टहरासमेत बनाएका।
अब त्यस्तो छैन। वडा कार्यालयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिएको छ।
टुसालमा त्यस्तै। दुई रोपनी १३ आना जग्गा मिचिएको। विभिन्न व्यक्तिले टहरा बनाएको। वडा कार्यालयले यसलाई आफ्नो मातहत ल्याउने तयारी गर्दैछ।
दुवै टोल काठमाडौंको ४ नम्बर वडामा पर्छ। यहाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको १५ महिनामा ५४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिएको छ। नयाँ खोज्ने क्रम जारी छ।
अतिक्रमणमुक्त जग्गामा पार्क बनाउने अभियान सुरु गरिएको वडाध्यक्ष मोहन विष्टले बताए।
यस निम्ति नौवटा समिति बनेका छन्। वडाका सक्रिय समाजसेवी समितिमा छन्। नौमध्ये सात समितिले आफ्नो क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फर्काइसकेको छ।
कति जग्गा फर्काउन अदालत गुहार्नुपर्यो। रारा उपभोक्ता समिति उदाहरण हो। यो समितिले टोलको दुई रोपनी जग्गा फर्काउन मुद्दा हालेको थियो। काठमाडौं उच्च अदालतले वडाकै पक्षमा फैसला गर्यो। यहाँ सार्वजनिक पार्क बनेको छ। वृद्धाश्रम खोल्ने काम सुरु भएको छ। नगर विकास कोषमार्फत् युएनडिपीले भवन बनाइदिन लागेको वडाध्यक्ष विष्टले जानकारी दिए।
‘समिति गठन गरेर स्थानीयबाटै काम गराउने निर्णयले सकारात्मक नतिजा दिएको छ,’ अध्यक्ष विष्टले भने, ‘फर्काइएका जग्गामा पार्क बनाउने निर्णय गरेका छौं।’
धन्वन्तरीको ८ रोपनीमा पार्कको कार्ययोजना बनिसकेको छ। दाहाल गाउँ, नयाँ कोलनीको ११ रोपनीमा पार्क बनाउन पर्खाल लगाउने काम भएको छ। यसमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यहाँ स्थानीयले अनधिकृत घर बनाएका थिए।
उता प्रगति टोलमा २५ रोपनी भिरालो जग्गा छ। अहिलेलाई किरियापुत्री भवन बनाइएको छ। बाँकी जग्गामा हरियाली पार्क बनाउने वडाको योजना छ।
बालुवाटार क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानन्यायाधीश निवास वरपरका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको वडा कार्यालयले जनाएको छ।
‘केही हदबन्दीका जग्गा पनि छन्,’ उनले भने, ‘ती जग्गा खोजी हुँदैछ।’
अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र सार्वजनिक पार्क निर्माण सफल हुनुमा स्थानीयको साथ रहेको अध्यक्ष विष्टले बताए।
उनले यसो भनिरहँदा वडाध्यक्ष कक्षमा सेवाग्राहीको घुइँचो थियो। आउने-जानेहरु उनीसँग हात मिलाउँदै थिए।
तीनवटा कोठाको एकतले कार्यालयमा अध्यक्षसहित चार सदस्य सँगै बस्छन्। बाहिर सहायता कक्ष छ। नबुझेका कुरा बुझाउने कर्मचारी छन्। सेवाग्राही भने जे सोध्न पनि अध्यक्षकहीँ आउँछन्। उनी सबैलाई भेट्छन्। कुराकानी गर्छन्। कामको आसय बुझेर वडा सदस्यलाई जिम्मा लगाइदिन्छन्।
हामीले वडाध्यक्षसँग फेरि कामकै कुरा अघि बढायौं।
एक वर्षमा ६० वटा विकासका काम भएको उनले जानकारी दिए। यसमा साना सडक सुधारदेखि ढल निर्माणका कामसम्म छन्। स्थानीयलाई साबुन बनाउने र कौसी खेती गर्ने तालिम दिइएको छ। यस्ता कार्यक्रम सबै टोलमा बराबरी भएका छन्।
विकासका काम गर्न वडाले सामाजिक अभियन्ता, नागरिक मञ्च, सहकारी र उपभोक्ता समितिसँग सुझाव लिन्छ। स्थानीयसँग आवश्यकता माग गर्छ। त्यसै आधारमा कार्ययोजना अघि बढाउँछ।
यो वडामा ६५ हजार जनसंख्या छ। १० हजार घरधुरी छन्। ठूलो वडा भएकाले पैसाको समस्या छैन। गत आर्थिक वर्ष ८ करोड ७३ लाख कर उठ्यो। महानगरले गत वर्ष २ करोड बजेट दियो। यो वर्ष ३ करोड पाउने भएको छ। दाताहरुले पनि पैसा दिन्छन्।
‘हामी जनसहभागितामा काम गर्छौं। जनताले माग गरेपछि कार्यक्रम तय हुन्छ। अपवादबाहेक काम गर्न समस्या छैन,’ उनले भने।
वडाले यो आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तय गरेको छ। यसपालि ठूला आयोजनामा हात हाल्ने योजना छ।
‘एक वर्षमा सानातिना थुप्रै काम गर्यौं। विकास आयोजनादेखि फोहोर व्यवस्थापनमा सघाउन कौसी खेतीको तालिम दियौं,’ विष्टले भने, ‘महानगरले वडाध्यक्षको निर्देशनमा १० लाखसम्म काम गर्न छुट दिएको छ। त्यही भएर साना आयोजना सफलतापूर्वक गर्यौं। अब ठूला काममा हात हाल्ने हो।’
ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि महाराजगन्ज, धुम्बाराहीमा ओभरहेड ब्रिज राख्ने योजना छ। ‘क्लिन द सिटी’ अभियानअन्तर्गत हरियाली पार्क र सरसफाइलाई ध्यान दिइनेछ।
सार्वजनिक जग्गालाई हरियालीमा परिणत गर्नुको कारण के? उनले भने, ‘मैले गाई चराउने ठाउँ खै? मैले फुटबल खेल्ने ठाउँ खै? ती सबै ठाउँमा घर बने। सास फेर्न हम्मे छ। टहलिने, मन बलाउने, साना नानी दगुर्ने र प्राकृतिक प्रकोप बेला ओत लाग्ने ठाउँ खै?
‘हामी यही कमी पूरा गर्नेछौं। वडा नम्बर ४ लाई हरियाली बस्ती बनाउने छौं,’ उनले भने।source:setopati